Waa maxay Xusuus-qorka Daynta? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Waa maxay Xusuus-qorka Daynta?
Isha sawirka: freebusinessideas.net
Milkiilayaasha ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxay ka helaan dalabaadka macaamiisha, waxay sameeyaan qaansheegyo, ururiyaan lacag-bixinno, waxayna la macaamilaan waraaqaha iibiyeyaasha.
Isku soo wada duuboo, milkiilayaasha ganacsiyadu waxay la kulmaan arrimo badan oo xisaabaadka kuwaas oo u baahan feejignaantooda.
Taasi waa meesha ay ka soo galaan xisaabiyeyaasha xirfada leh ee Ignite Spot. Waxaan kala shaqeynay milkiilayaasha ganacsiyada yaryar mashruucyo xisaabin oo kala duwan.
Xisaabaadka la bixin karo iyo kuwa la qaadan karo, iyo sidoo kale maamulka kaadhka deynta, liiska mushaharka, iyo in ka badan, ayaa dhamaantood laga heli karaa adeegyadayada onlaynka ah. Xataa xilliga canshuurta, shirkadeena xisaabiyeyaasha ayaa caawin karta milkiilayaasha ganacsiga.
Xusuus-qorku waa tusaale dukumeenti caadi ah oo ay qabtaan xisaabiyeyaashayada.
Intaa waxaa dheer, waxaad aaday bakhaar si aad u soo celiso ama ugu beddelato alaab aad ka soo iibsatay, sarkaalka ka dambeeya miiska ayaa ku siinaya warqad, oo ay ku jiraan waxyaabaha gaarka ah ee alaabta la soo celiyay iyo sidoo kale lacagta. Xusuus-qorka deynta ayaa ah magaca warqadda noocaan ah.
Waa inaad tixgelisaa su'aalaha soo socda si aad u fahamto mawduuca:
Waa maxay xasuus-qorku?
Macluumaad noocee ah ayaa ku qoran xusuusta deynta?
Waa maxay sababta warqadaha deynta loo soo saaray?
Sidee buu u shaqeeyaa xusuusta credit?
Sideed u diyaarisaa xusuusta credit?
Goorma ayaad soo saartaa qoraalka deynta?
Waa maxay Qaybaha iyo Qaabka Xusuus-qorka Daynta?
Intee in le'eg ayay xusuus-qorka dayntu soconaysaa?
Xusuus-qorka deynta, oo sidoo kale loo yaqaan xusuusta xusuusta, waa dukumeenti uu iibiyay iibsadaha. Kadib markay diraan qaansheegta dibadda, iibsadaha ayaa helaya dukumeentigan.
Xusuus-qorka amaahdu wuxuu hoos u dhigi karaa qiimaha iibsadaha ama wuxuu ka saari karaa qiimaha shay gabi ahaanba.
Marka iibiyuhu soo saaro xusuus-qor credit, waxay khusaysaa xisaabta iibsadaha ee xisaabteeda jirta si loo yareeyo wadarta guud.
Xusuus-qorka dayn-celinta lama mid aha lacag-celinta. Marka iibsaduhu helo lacag celin iibsi, iibiyuhu wuxuu soo celinayaa lacagtii oo dhan.
Xisaabiyeyaashayada khibradda leh waxay ka caawin karaan milkiilayaasha ganacsiga waajibaadyada xisaabinta aasaasiga ah, sida bixinta qoraallada deynta, la socodka iibka, iyo dirida qaansheegyada.
Milkiilayaasha ganacsiga ee doorta in ay ka bixiyaan masuuliyadooda xisaabinta Ignite Spot waxay diiradda saari karaan waxa ay sida ugu fiican u qabtaan: kobcinta dakhliga shirkadooda.
Xusuus-qorka amaahda waxa loo isticmaalaa in lagu dhimo hadhaaga muuqda ee macmiilka. Dhibcaha daahista waxay khuseeyaan kaliya qaansheegta. Dhibcaha dib u dhaca wax saamayn ah kuma laha akoontada macmiilka ilaa laga codsado qaansheegta kaydsan
Macluumaad noocee ah ayaa ku qoran Xusuus-qorka Daynta?
Xusuus-qorku waa dukumeenti bixiya macluumaad badan oo muhiim ah. Caadi ahaan waxay ka mid yihiin dalabka iibsiga (ama PO), iyo sidoo kale lacag bixinta iyo shuruudaha biilasha ee xusuusta deynta.
Qaybaha kale ee muhiimka ah ee macluumaadka ku jira xusuusta deynta ayaa ah cinwaanka rarida, liiska alaabta, qiimaha, tirada, iyo taariikhda iibka.
Dhammaan macluumaadkan waxay ka caawiyaan iibiyaha maaraynta agabka. Waxa kale oo ay ku daraan sababta soo saarista qoraalka xusuusta ee dukumeentigan.
Tusaalaha Xusuus-qorka Daynta
Ka soo qaad Shirkadda Iibiyaha ayaa soo saartay $400 qaansheeg iib ah 50 xabo oo badeecooyin ah oo ay ugu dirtay Shirkadda Iibka ah qiima dhan $4 midkiiba.
Iibsaduhu wuxuu u sheegaa iibiyaha in hal unug uu khalad yahay. Intaa ka dib, shirkadda iibiyuhu waxay soo saari doontaa xusuus-qor deyn ah $4.
Dhammaadka xilliga warbixinta kasta, iibiyuhu waa inuu hubiyaa dhammaan qoraallada deymaha ee furan si uu u eego haddii ay ku xidhi karaan xisaabaha furan ee la heli karo.
Haddii software-ka xisaabinta uu ogolaado, tani waxay yaraynaysaa wadarta lacagta dollarka ee biilasha maqan waxayna yarayn kartaa lacagaha la siiyo alaab-qeybiyeyaasha.
Waa maxay sababta qoraallada amaahda loo soo saaray?
Iibiyuhu waxa laga yaabaa inuu u soo saaro warqad qoraal ah iibsadaha sababo kala duwan dartood. Iibsaduhu wuxuu u soo celinayaa shay la iibsaday iibiyaha waa ujeedo guud.
Shayga ayaa laga yaabaa inuu waxyeelo gaaro, cabbirka ama midabka khaldan, ama iibsadaha ayaa laga yaabaa inuu si fudud u beddelay maskaxdiisa ama maskaxdeeda iibka.
Sababta kale ee iibiyaha laga yaabo inuu ku siiyo warqadda credit waa haddii qiimihiisu isbeddelo. Tusaale ahaan, macaamiilku waxa laga yaabaa inuu helo badeecad hal maalin ka hor intaysan dhimin 30% qiimaha.
Iibiyuhu waxa uu ogolaadaa in uu siiyo iibsadaha xusuus-qor credit farqiga u dhexeeya qiimaha iibka ee hore iyo kan cusub.
Memos Credit ee Bangiga
Xusuus-qorka deynta bangigu waa shay xariiq ah oo ku jira bayaan xisaabeedka bangiga ee shirkadda oo kor u qaada hadhaaga koontada hubinta.
Xusuus-qorka Credit Bank ee ku jira Dib-u-heshiisiinta Bankiga waxaa ka mid ah bangigu oo ku daray ribada uu ka helay lacag dhigaal ah, bangigu u ururinayo qoraal shirkadda, iyo soo celinta kharashkii bangi ee hore.
Dib-u-heshiisiinta bangigu dib-u-heshiisiin ma samaynayso ilaa ay ku darto cadadka xusuus-qorka amaahda ee bangiga ee xisaabaha guud ee shirkadda.
Sababta oo ah waxay hore ugu dartay hadhaaga bangiga. Shirkaddu waxay ka saari doontaa Lacag caddaan ah oo ay deyn doontaa akoon kale si ay u duubto qoraalka deynta bangiga.
Sidee buu u shaqeeyaa Xusuus-qorka Kaydinta?
Sideed u dejisaa qoraalka deynta?
Haddii iibsaduhu uu bixiyay dhammaan qaddarka qaansheegta, waxay haystaan ​​laba ikhtiyaar oo ay ku xallin karaan khilaaf iyaga oo raalli ka ah. Mid ka mid ah beddelka ayaa ah in lagu dabaqo qoraallada amaahda lacag bixin kasta oo mustaqbalka ah sababtoo ah iibiyaha. Intaa waxaa dheer, iibsaduhu wuxuu codsan karaa lacag caddaan ah oo ku salaysan qaddarka uu iibiyuhu ku leeyahay iibsadaha.
Haddii iibsaduhu uusan weli bixin iibiyaha, waxay u isticmaali karaan xusuusta xusuusta qayb ka mid ah qaansheegta. Ka dib dhimista lagu sheegay qoraalka, waxay weli ku qasbanaan doonaan inay bixiyaan waxa u dhiman.
Xusuus-qorka deynta, iibsaduhu wuxuu u diiwaangeliyaa xusuusta sidii hoos u dhigista hadhaaga la bixin karo akoonkiisa. Iibiyuhu waa in uu u diwaan galiyo qoraalka sida dhimista sidoo kale, si kastaba ha ahaatee, waa dhimista xisaabaadkiisa in la helo (lacag soo gasha).
Sideed U Diyaarisaa Xusuus-qorka Daynta?
Software-ka xisaabaadka waxa hadda isticmaala shirkadaha intooda badan si ay u xisaabiyaan oo ay u soo saaraan qaansheegyada iibka, iyo sidoo kale xusuusta xusuusta iyo qoraallada deynta. Software-ka xisaabaadka ayaa ka faa'iideystey ganacsiyada isagoo u oggolaanaya kormeerida dalabka oo dhan laga bilaabo helitaanka qaansheegta ilaa bixinta xusuusta deynta, iyo sidoo kale dib-u-cusboonaysiinta xisaabaadka iyo biilasha.
Waddamada intooda badan, cashuurta dadban waxay uga baahan tahay iibiyaha inuu soo saaro qoraal deyn ah oo uu qeexo macluumaadka qasabka ah ee ay tahay inay ku jiraan.
GST ee Hindiya, VAT ee Imaaraadka Carabta, VAT ee Kenya, VAT ee Bahrain, iyo wixii la mid ah waa tusaalayaal nidaamyada canshuuraha ee u baahan alaab-qeybiyeyaasha si ay u soo saaraan xusuus-qor credit oo waafaqsan canshuuraha.
Goorma ayaad Bixinaysaa Xusuus-qor credit?
Iibiyuhu waxa uu u soo saari karaa xasuus-qor iibsadaha duruufo kala duwan, iyo qaar ka mid ah kuwa caadiga ah waa kuwan hoose:
Sabab kasta ha ahaatee, iibsadaha ayaa soo celiyay alaabta ama diiday adeegyada.
Alaabooyinka la geeyey oo burburay ama cilladaysan.
Sicirka qaansheegta bilowga ah ayaa lahaa khaladaad, kuwaas oo badankoodu ahaa wadaad.
Macmiilku wuxuu si xad dhaaf ah u bixiyay qaansheeggii asalka ahaa.
Maxay yihiin Qaybaha iyo Qaabka Xusuus-qorka Daynta?
Xusuus-qorka deynta ayaa caadi ahaan ka kooban dhowr qaybood oo macluumaad muhiim ah. Caadi ahaan waxay ku jiraan lambarka dalabka iibka, iyo sidoo kale lacag bixinta iyo shuruudaha biilasha ee xusuus-qorka deynta.
Xusuus-qorka deynta, waxaad ka heli doontaa magacaaga iyo cinwaankaaga, liiska alaabta, qiimaha, tirada, iyo taariikhda iibka.
Dhammaan macluumaadkan waxay ka caawiyaan iibiyaha maaraynta agabka. Waxa kale oo ay sharraxaysaa sababta ay u soo direen qoraalka deynta.
Waa maxay Template For Credit Memo?
Qaabka Memo Credit
Ku bilow magaca shirkadda, ciwaanka jirka, iyo wixii macluumaad ah ee lagala xiriiri karo, sida iimaylka ama mareegta shirkadda. Xusuus-qorka deynta waa inuu ku jiraa lambarka aqoonsiga canshuurta ee sare.
Isticmaal kood kasta ama lambaro aad leedahay si aad u aqoonsato macaamilka gudaha ururka.
Muuji lambarka xusuusta deynta, lambarka qaansheegta asalka ah, iyo habka lacag bixinta ee loo baahan yahay.
Waa inaad gelisaa kuwan soo socda xusuusta credit shan tiir; tirada alaabta, lambarka aqoonsiga ama sharraxaadda, sababta qoraalka deynta, qiimaha shayga, iyo wadarta qiimaha.
Qoraalada credit-ku waxay leeyihiin 12 bilood oo ansax ah laga bilaabo taariikhda ay soo saareen. Waxay kala noqonayaan hadhaaga haddii aadan ku isticmaalin 12 bilood gudahood.
Waxay ku daabacaan qiimaha xusuustaada boonnada waxayna ka xaqiijin karaan tafaariiqda xusuusta credit kasta.
Xusuus-qorka deynta waa qaansheeg-qeybiyaha alaab-qeybiyaha oo leh qiime xun oo ka dhigan credit. Xusuus-qorka deynta waa qaan-sheeg qaddar- taban oo aad u gudbiso alaab-qeybiye si aad ugu wargeliso credit-ka aad u diiwaan-gelisay alaabada ama adeegyada aad soo iibsatay.
Xusuus-qorku ma lacag-celin baa?
Xusuus-qorka deynta waa macaamil ganacsi oo dhejis ah oo ay ku dalban karaan lacag-bixin ahaan ama dhimis qaansheegta macmiilka. Markaad dib u soo celinayso lacagta macaamilka, lacag celintu waa macaamil ganacsi oo dhejis ah. Tani waxay ka dhigan tahay in qoraalada deymaha loo isticmaalo si loo dhimo dheelitirka muuqda ee macmiilka.
Gelida Xisaabinta Memo Credit
Haddi shirkad ay siiso macmiilka xasuus-qor credit si ay u xaliyaan khaladka keenaya xad-dhaafka qadarka iibka, gelitaanka joornaalka ee xasuus-qorka deynta waxa la samayn karaa iyada oo laga jarayo koontada dakhliga iibka iyo xisaabinta akoonnada la heli karo.
Xusuus-qorka deynta ma la isticmaali karaa onlayn?
Maya. Inta badan qoraalada deynta, nasiib daro, waxa kaliya oo lagu isticmaali karaa bakhaarka dhexdiisa.
Xusuus-qorka amaahdu ma dhici karaa?
Sax maaha. Dhab ahaantii, ma jiri karto taariikhda dhicitaanka ama muddada shahaada hadiyadda ama qoraalka deynta oo la iibiyay ama loo bixiyay tixgelin gobolkan.
Warqadaha deyntu ma sharci baa?
Haa, way yihiin. Xusuus-qorka amaahda, sida qaan-sheegyada, waa waraaqo sharci ah oo kuu oggolaanaya ikhtiyaarka muhiimka ah ee aad ku joojinayso qaansheegta horay loo soo saaray, dhammaan ama qayb ahaan.
Xusuus-qorku ma mid togan baa mise waa taban?
Xusuus-qorka deynta ayaa caadi ahaan ah macaamil ganacsi oo taban sababtoo ah soo celinta alaabada alaabada iyo ka saarida lacag taban akoonnadaada.
Xusuus-qorka amaahdu ma la mid yahay qoraalka amaahda?
Haa Waa. Warqadda deynta, oo sidoo kale loo yaqaano xusuusta deynta ama xusuusta deynta, waa dukumeenti sharciyeed rasmi ah oo ay u geeyaan macaamiisha, oo la mid ah qaansheegta ama amarka wax iibsiga, si loogu wargaliyo in deyntu ay u khuseyso akoonkooda sababo kala duwan dartood.
Dhammaan macluumaadka ku jira xusuusta deynta, way iska caddahay inay tahay dukumeenti muhiim ah.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad awood u leedahay inaad si sax ah u diyaariso oo aad ka kooban tahay dhammaan xaqiiqooyinka lagama maarmaanka ah si aad u gaarto guul deg deg ah qaybtaada warshadaha ama shaqadaada.
Source source: https://i0.wp.com/www.freebusinessideas.net/wp-content/uploads/2019/01/what-is-a-credit-memo.png?fit=750%2C500&ssl=1
Dhibcaha xun waxaa macno ahaan loo tixraaci karaa isagoo leh dhibco credit 580 iyo ka hooseeya. Haddaba, haddii…
15 Best Software Grammar Checks Software ee 2022
Waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn heerka dhaawaca uu hal qalad u geysan karo saacadahaaga dheer ee…
10ka ugu sarreeya ee Shaqooyinka Kalkaalinta Kharashaadka ugu sarreeya sannadka 2021
Waa kuma Ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NBA -da? | 15 Ugu Fiican
NBA waxay caan ku tahay inay tahay tan ugu hal abuurka badan ururada isboorti ee Waqooyiga Ameerika, soo saara…